Feon'ireo Tool, feon'ireo nahita fa, feon'ireo ny router - Strongsaw
Niorina tamin'ny taona 2009, dia fatratra Strongsaw niakatra ny tohatra ny fahombiazana azo itokisana mpanamboatra, milina wholesaler sy ny mpanondrana.
Ny sakany Gamut ny vokatra dia ahitana ny feon'ireo milina, feon'ireo fitaovana, fitaovana vy miasa sy ny fitaovana metaly miasa.
Noho ny hevitra ho mpanamboatra ny tsara indrindra sy ny toetra maro samihafa ny vokatra malaza ho an'ny mpanjifa, dia miroborobo hanana ny toetra sy ny maha-tokana ny vokatra simba.
Isika hahatakatra ny zavatra ilaina miovaova sy ny fitakiana ny orinasa anatin'ny hardcore ity fifaninanana.
Isika nisafidy ny ny mpifaninana rehefa manolotra ny hoatr'izany sy natao manokana ho an'ny sarobidy milina mpanjifa ao anatin'ny fotoana voalazan'ny filanjana azy.
Ankoatra izany, ao anatin'ny fotoana fohy ny androm no Nahazo malalaka mpanjifa fototra ao an-tsena.
Noho ny tanjona manan-manahirana ny famokarana-maimaim-poana, isika dia tohanan'ny hiringiriny-foto-drafitrasa avo, izay fitaovana amin'ny iray amin'ireo teknolojia farany ampiasaina ny manome vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa.
Ankoatra izany, ny ekipa ny manam-pahaizana matihanina efa voaporofo ny lalana firaketana amin'ny alalan'ny rehetra, ny asa mafy sy ny fanoloran-tena.
Tsy ho azo antoka fa ny vokatra dia havaozina matetika ao mifandrindra amin'ny miovaova fitakiana ny tsena, ary manolotra ihany koa ny toerana manokana customization.
Ireo rehetra ireo anton-javatra sy ny fomba fiasa miasa amin'izao fotoana izao no nanampy ny orinasa ny fanatratrarana ny miovaova fitomboana ao amin'ity orinasa mifaninana.
Ny base clientele ahitana mpanjifa avy any India,, Rosia, Etazonia sy Austrailia, France.
Contact us: sophie@strongsaw.com
Teknolojia avo lenta ny famokarana sy ny fitomboan'ny avo lenta fantatra singa avy amin'ny mpamatsy.
Tsy manolotra fitsipika milina, fa fomba amam-panao rehetra atao araka ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa.
Customer Service Ary Support
Izahay fanontaniana misokatra ho an'ny rehetra ary manampy koa rehefa afaka ny fe-potoana efa lany daty fiantohana, miaraka amin'ny fanompoana ekipa manerana izao tontolo izao isika fa ny milina manome fahafahana hitsahatra na oviana na oviana.
Haingana izahay mamaly fanontaniana mpanjifa rehetra sy ny olana raha hamaha azy ireo isika raha vao araka izay azo atao.